WAR LA SUGAYAY: Halyeey Sir Alex Ferguson Oo Kala Doortay Cadawgiisa Uu Mudada Lasoo Xifaaltamayay Ee Liverpool & Man City Xilli Lasoo Dusiyay Kooxda Uu Horyaalka U Saadaalinayo. - GOOL24.NET
Tababaraha halyeeyga ah ee kooxda Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa u muuqda mid kala xushay kooxaha uu kula soo loolamayay kubadda cagta ee Liverpool iyo Manchester City oo uu cadaw ba’an lasoo ahaa balse haatan labadooda loolanka horyaalku ka dhexeeyo.
Iyadoo ay shalay Man City guul kasoo gaadhay Crystal Palace isla markaana ay Liverpool ka gudubtay imtaxaankii Chelsea ayay haatan aad usii adkaatay in la sheego kooxda hanan doonta horyaalka mudo bil ka yar kaddib.
Kooxda tababare Jurgen Klopp ayaa haatan ah mida hoggaanka laba dhibcood ku haysa walow ay kulan dheer yihiin ciidamada Pep Guardiola.
Dhinaca kale Manchester City ayaa ah kooxda kulamada adagi u hadheen maadaama ay kusoo wajahan yihiin kulamada isku xiga ee Man United iyo Tottenham oo ay dheelayaan kahor bisha May.
Haddaba, Sida haatan uu soo tabiyay Jonathan Walters oo la sheekaystay shaqsi ku dhawaaday Ferguson ogaadayna saadaashiisa ayaa sheegay in SAF uu aaminsan yahay in sanadku yahay midkii Liverpool isla markaana ay soo af-jari doonaan abaarta daba dheeraatay ee horyaalka.
Sababta uu cuskanayo Ferguson ee lasoo sheegay ayaa ah kulanka Manchester Derby oo uu aaminsan yahay in United ay natiijo ka heli doonto kooxda Guardiola.
Walters oo sheekada ka warramaya ayaa yidhi “Waxaan baraha bulshada kula sheekaysanayay Phil Bardsley, Magac ayaanan halkan ku sheegi doonaa, Waxa uu isagu la fadhiyay Sir Alex Ferguson”
“Waxa uu la fadhiyay isaga waxaana uu aaminsan yahay in Liverpool ay samayn doonto si ay ugu guuleysato Koobka, Waxa uu filayaa Liverpoo (Inay hananayso koobka) sababtoo ah waxa uu filayaa in United ay wax ka heli doonto kulanka City”
Dabcan United qudheeda ayaa si weyn ugu baahan saddexda dhibcood ee kulankaas maadaama oo ay dagaal weyn oo kaalmaha 3 iyo 4 ah kula jiraan Chelsea, Tottenham iyo Arsenal.
Adigu akhriste ma aaminsantahay aragtida uu dhiibtay Ferguson oo lagu sheegi karo cadaw ay Liverpool yeelato midka ugu mug weyn mase qabtaa in United ay kooxda ay xifaaltamaan kaga ducaysan doonto dhibco ay ka goyso Manchester City.
SAF waa saxan yahay markan
Maya. War jiraa cakaaruu iman man city lama dhayalsankaro
Maya.man city wax kasta waysamayn